Jona 1, 2018 Admin
$128M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Huobi ny hanomboka crypto ETF
Cryptocurrency sehatra varotra Huobi ny fandefasana ny fifanakalozana ara-crypto-varotra tahirim-bola (ETF), ny fampiasam-bola safidy izay hamela antsinjarany mpampiasa vola mba hahazo hatsiaka ny harona toe-bola fotsiny fa tsy iray isaky ny mandeha.
Ny fampiasam-bola fitaovana, antsoina hoe HB10, ankehitriny misokatra ho an'ny famandrihana sy ny fividianana mampiasa ihany no manaiky cryptocurrencies, fa tsy vola Fiat.
Ny orinasa koa fa satria koa ny vokatra ihany koa rafitra mpampiasa vola azo, Mety mety “hampihenana ny fiantraikan'ny rafitra fidirana sy fivoahana” amin'ny tokan-tena cryptocurrencies.
GMO nandefa finday fampiharana izay mamela mahazo mpilalao Bitcoin
Zavatra teknolojia orinasa GMO Internet Group dia lasa fampiharana finday vaovao izay mamela ireo mpampiasa vola amin'ny alalan'ny milalao fotsiny Bitcoin lalao.
Ny fampiharana vaovao - antsoina hoe CryptoChips - dia voalohany ho tafiditra amin'ny tena-ny fotoana ihany koa ny lalao ady Faritany novokarin'ny GMO hoe “Ady hafakely.”
Goavam-be ny teknolojia hoy ny fanantenana dia ny handrisika ny vahoaka mba ho zatra cryptocurrencies alalan'ny fampiharana vaovao, satria mpampiasa dia mila mampiasa ny nomerika mpanjifany mba handray sy hampiasa Bitcoin.
Singapore mpandraharaha nividy fahazoan-dalana Japoney crypto takalon'ny $ 67M
Eric Cheng, mahomby Real Estate mpandraharaha, dia nahazo 100% tsatòka amin'ny teny Japoney FSA-fahazoan-dalana FX Trade Financial Co., Ltd, ny sehatra ara-barotra FX, ary koa ny BitTrade, ny fahazoan-dalana ara-barotra cryptocurrency sehatra ny foibeny ao Japana.
Kasainy ho mahery vaika izy mitsambikina mihoatra ny sehatra ara-barotra lehibe indrindra any an-tany Japon & mety hanitatra ny tolotra manerantany.
Eric Cheng Lasa vahiny voalohany mba manana 100% tsatòka ao amin'ny Japoney FSA-fahazoan-dalana cryptocurrency sehatra varotra
Square mitombo amin'ny zava-dehibe ny $ 8b satria nanampy Bitcoin varotra tamin'ny taon-dasa
Nizara ny Square Inc. efa mihoatra ny avo roa heny amin'ny vidiny nandritra ny taon-dasa.
Ny fandoavam-bola ny tahiry mafy dia nifanosika ny efa ho 50%, nampiany about $8 lavitrisa in tsena vidy, satria nanakodia avy Bitcoin varotra tamin'ny Novambra ho an'ny mpanjifa ao aminy Cash App, izay mamela ireo mpampiasa vola mamindra ny namana sy ny fianakaviana.
FMI banky foibe manam-pahefana Mampirisika hifaninana amin'ny cryptocurrencies
Ny manam-pahefana ambony ao amin'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (IMF) no mandrisika banky foibe mba hanana "tsara kokoa" Fiat vola mba hihazonana ny mpitarika haingana ny cryptocurrency.
FMI tale lefitra Dong Manao ny raharaha fa "crypto fananan'ny Mety hampihena indray andro fangatahana ho an'ny banky foibe vola" sy ny andrim-panjakana dia tsy maintsy manao zavatra bebe kokoa mba tsy hamela izany hitranga. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, mba "hahasakana ny mifaninana tsindry fananan'ny crypto Mety hiezaka mafy ny Fiat vola,"Banky foibe tokony hanaraka ny sasany amin'ireo foto-kevitra fototra mitondra fiara fananan'ny nomerika.
Visa mahazo Ripple [XRP] Par...
amor hoy i:
Jona 10, 2018 amin'ny 2:37 AM